Nepal Dayari | अफिस जाने तैयारी गर्दै थिए तर आफ्नै भाईले ह ‘त्या गरे साजनको : अधुरै रह्यो राष्ट्रसेवकको सपना !
अफिस जाने तैयारी गर्दै थिए तर आफ्नै भाईले ह ‘त्या गरे साजनको : अधुरै रह्यो राष्ट्रसेवकको सपना !
असार २८, २०७८ सोमबार ३७३ पटक हेरिएको
विराटनगरमा मा’द’क प’दा’र्थ से’वन गरेका भाइले आफ्नै दाइको ह ‘त्या गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जिसीका अनुसार शुक्रबार राति महानगरपालिका–५ मा पारिवारिक वि’वा’दका क्रममा भाइले ह ‘ति ‘या ‘र प्रयोग गरि दाइको ह ‘त्या गरेका हुन्।
प्रहरी प्रमुख जिसीका अनुसार ला ‘गु प ‘दा ‘र्थको ल ‘तमा फसेका ३१ वर्षीय भाइ साजन सिंहले ४२ वर्षीय दाइ भोला सिंहमाथि राति करिब साढे १० बजे आ’क्र’म’ण गरेका हुन् ग’म्भी’र घा’इ’ते भएका भोलालाई प्रहरीले उ’द्धा’र गरेर उपचारका लागि विराटनगर अस्पताल पुर्‍याएको थियो। राति ११ बजेतिर चि’कि’त्स’कले मृ’त घो’षि’त गरिदिएको प्रहरीले जनाएको छ । भो’लाको घाँ’टीको दा’याँ भाग, टा’उ’को र दे’ब्रे हातमा ग’हि’रो चो’ट लागेको मोरङ प्रहरी प्रमुख जिसीले जानकारी दिए।
विवाहपछि स’म्ब’न्ध वि’च्छे’द गरिसकेका साजनकी पूर्व श्रीमतीलाई घरले समर्थन दिएर राखेको सन्र्दभमा सिंह परिवारमा वि’वा’द हुँदै आएको थियो । स्थानीयका अनुसार गत वैशाखमा साजनको श्रीमतीसँग सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको हो । मा’द’क पदार्थ र ला ‘गु ‘औ ‘ष ‘ध से’व’न गरेर सधैँ घरमा झै ‘झ ‘ग ‘डा तथा कु ‘ट ‘पि ‘ट गर्न थालेपछि श्रीमतीले स’म्ब’न्ध विच्छेद गरेको स्थानीयको भनाइ छ ।
तर साजनकी पूर्व श्रीमती सिंह परिवारको संरक्षणमा थिइन् । प्रहरीका अनुसार पूर्व श्रीमतीलाई परिवारका अन्य सदस्यले समर्थन गरेको भन्दै बारम्बार साजनले घरमा झ ‘ग ‘डा गरिरहेको पाइएको छ । त्यही विषयलाई लिएर वि’वा’द गरिरहेको पाइएपछि साजनलाई सम्झाईबुझाई गर्न पुगेका दाजुकै ह ‘त्या गरेको प्रहरीको प्रा’र’म्भि’क अ’नु’स’न्धा’नबाट खुलेको हो । मृ’त’क भोलाका १६ वर्षमूनिका दुई छोरा र श्रीमती छन् ।
भोला राष्ट्रिय अ’नु’स’न्धा’न कार्यालय खोटाङका सूचकका रुपमा कार्यरत हबल्दार हुन्। उनी निषेधाज्ञाका क्रममा हेटौँडामा आवश्यक तालिम सकेर विराटनगर घर आएको कार्यालयका प्रमुख हीरा भट्टराईको भनाई छ। भट्टराईका अ’नु’स’न्धा’नको इमान्दार कर्मचारीका रुपमा रहेका भोला सवारीसाधन बन्दका कारण खोटाङ जान पाइरहेका थिएनन्। भोला शुक्रबार बिहान एम्बुलेन्सबाट कार्यलय जाने तयारीमा थिए। अन्तिम समयमा एम्बुलेन्ससँग तालमेल नमिलेपछि उनी घरमै बस्न बाध्य भएका थिए। – देश संञ्चार बाट